Saylici Oo Xadhiga Ka Jaray Dib U Habaynta Jidka Badhtamaha Boorame | Hangool News
Saylici Oo Xadhiga Ka Jaray Dib U Habaynta Jidka Badhtamaha Boorame
“Waxaynu Ku Horumaraynaa In Qof Kastaaba Masuuliyadiisa Iska Saaro Xil Gaar Ah” Saylici
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), ayaa shalay xadhiga ka jaray wadadda hal-bawlaha ah ee dhex marta magaaladda Boorame, taasi oo ay dawladda hoose ee Boorame dib u dhis balaadhan ku sameeyeen.Waxaana munaasibadaasi xadhig ka jarista madaxweyne ku xigeenka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda xanaanadda xoolaha, wasiirka xidhiidhka goleyaasha, maayarka magaaladda Boorama iyo xubno ka tirsan xildhibaanadda golaha degaanka Boorama.
C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo hadal ka jeediyay munaasibadii xadhig ka jarista ee wadadaasi ayaa ku bogaadiyay golaha degaanka Boorama dhismaha wadadaasi, isagoo xusay in tallaabadaasi ay ka mid tahay waajibaadka loo doortay golaha degaanka.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in cid kasta oo masuuliyad haysa looga baahan yahay in ay ka soo baxdo waajibaadkeedda. Waxaanu dhinaca ugu baaqay bulshadda ku dhaqan magaaladda Boorama in ay si fiican isaga bixiyaan cashuuraha ku waajibay.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanu ugu mahad naqaynaa golaha degaanka Boorama wadaddani ay dhiseen, waxaanan u rejaynaynaa in ay noqoto wadadii ugu tayadda badnayd, uguna wanaagsanayd oo ay ku guulaysteen. Aad iyo aad ayaanan ugu hambalyaynayaa golaha degaanka Boorama, waana xilkii loo doortay, waana ta looga baahan yahay cid kasta oo innaga mid ah, masuuliyiinta qaranka min madaxweyne ilaa ka u hooseeya, waa in uu nin waliba xilkiisa iska saaraa masuuliyad.
Waxaana loo baahan yahay in qof waliba uu masuuliyad gaar ah isa-saaro, in bulshadda loo sinaado, in wixii khayraad ah ee dalka yimaadda si cadaalad ah loogu qaybiyo magaalooyinka. Reer Boorama waxaan leeyahay dadka magaalooyinka ku nool waa in ay si wanaagsan isaga bixiyaan cashuuraha”.
Maayarka magaaladda Boorama Maxamed Xuseen Maydhane, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay dayac-tirka iyo dib-u-habaynta ay ku sameeyeen wadadaasi. Waxaanu yidhi “Mudane madaxweyne ku xigeen waa wax qabadkii golaha degaanka Boorama, gaar ahaan lixdii bilood ee aan joogay, wax-qabadkaasi muuqda ayaanu samaynay, waa wadooyinkii casriga ahaa, waxaananu ku dhisaynaa lix bilood gudahood.”
Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanadda xoolaha Cumar Sheekh Maxamed Faarax, waxaaunu yidhi “Aad iyo aad ayaanu ugu mahad naqaynaa golaha degaanka Boorama, waxaananu rejaynaynaa, wax-qabadka dadku waxay u baahan yihiin in wax loo qabto. Nolosha dadku waxay ku xidhan tahay haddii ay tahay caafimaadka, biyaha, wadooyinka iyo korontadaba waa waxyaabaha ay nolosha bani’aadamku ku dhisan tahay.”